'Att arbeta med rättigheter' på Somaliska - Forum Syd Home Page
Ma tahay qof daneynaya inu codsado mashaariicda Forum Syd: Eeg Webinarkan
Plats: ,Tid: 14:00
Waxaad kaloo ka bogan doontaa koorsoyinka loogu tala galay ururada ka dhisan iswiidhan. Casharku wuxu socon doonaa laba saac waxana kala socon kartaa kombiyuutarkada. Kadib marki aad iska diiwaan gelisid boga Forum Syd, waxad heleysaa linkigii aad uga qeyb gelin laheyd casharka. Hadii aad qabtid su’aalo kusaabsan casharada, fadlan Email udir hassan.mao@forumsyd.org si uu uga sii diyaar garoobo kuguna jawaabo xiliga casharka.
Waxaad ubaahantahay Kombiyuutar samecad iyo cod leh. Fadlan kaso qeyb gal caharka adiga oo fadhiya meel aan dhawaq badneyn.
Wadada ama sanduqa boostada
Magaalada iyo nambarkada iyo magaaladada
Ururka aad ka tirsan tahay